Koowheel electric skuuta akwalite gburugburu ebe obibi-echebe mmata - Jomo Technology Co., Ltd
Koowheel electric skuuta akwalite gburugburu ebe obibi-echebe mmata
E nwere ọtụtụ ama hoverboard skuuta ika , olee otú Koowheel e gosiri dị ka ndị n'elu iri smart skuuta ika ruo ọtụtụ afọ? Biko na-emeghe gị Google nchọgharị, na mgbe ahụ chọọ Keywords " itule skuuta soplaya ", chọpụtara na www.koowheel.com ngalaba aha na mbụ na peeji nke.
Na iri abụọ na Century, o nwere ike kwuru na naanị mgbe nile bụ mgbanwe, a na-agbanwe ngwa ngwa oge, nlanarị nke ike kwere dịrị akụkọ na-haziri kwa ụbọchị. Na azụmahịa ụwa, n'azụ bụghị nanị pụtara tie, ọ pụtara ọnwụ, naanị na-aga n'ihu ọhụrụ na iji mee ka enterprise ọzọ dị ike na ndị ọzọ na-adịgide adịgide vitality. China si electric ụgbọala ụlọ ọrụ enwetela ihe karịrị afọ iri abụọ nke mmepe, mpi banyere a ọcha na-ekpo ọkụ ogbo.
Koowheel dị ka ndị mbụ ọkachamara smart skuuta ika , ka mgbe a mara maka di ọku ọhụrụ, onye na-elekọta kwuru na enterprise abụghị ọhụrụ, ọ dịghị development. Na ọhụrụ nwere ike ọ bụghị naanị ịnọ na technical larịị, ma a ga-ekere ke azụmahịa nlereanya, ma na-elekwasị anya na n'ji na n'ji ahụmahụ.
Ka onye ọ bụla maara, Kodak film, NOKIA na ekwentị mkpanaaka, ha bụ ndị a azụmahịa alaeze, ma ugbu a na-ebelata ka a odida, a mgbe na ihu delisting. The ihe mere ha ọdịda dị nnọọ mfe, ọ dịghị ọhụrụ vitality nke enterprise ila. Digital oge eruwo, smart ihuenyo mmetụ mobile ekwentị ekedisịm, ha ka na-ekpori nsọpụrụ nke gara aga, ike imeghari ka Oge ọhụrụ, na-enye a mma n'ji ahụmahụ.
Kpa ye mkpa nke ọgbọ ọhụrụ, electric itule skuuta ụlọ ọrụ ọ bụghị nanị na ịmepụta otu oru oma na mmiri ọgwụ mmetụta, ma ntị ka ọcha nke ejiji, jikọtara ya na mmadụ na ndụ na gburugburu ebe obibi, na ike a ndụ ka mma. Ugbu a, Koowheel electric itule skuuta leading brands are aware of this, obviously in the direction of continuous efforts.
Na mgbakwunye, ọtụtụ ụlọ ọrụ maara nke n'ji maara ihe ẹdude ngwaahịa ike izute mkpa nke ọhụrụ. Nke a ọhụrụ bụ mkpa, ma, ala fọrọ, ndị ọzọ bụ dịtụ ike, nwere ike mee ka uru na nkwado nke mmachi. Ya mere, itule wheel skuuta ụlọ ọrụ ga na-ọhụrụ dị ka nwere ina nke na-eji ọkụ, dị otutu ngwaahịa nke irreplaceable, nnọọ mfe ịghọ ọhụrụ nwa nke ahịa.
The oge na-ekpebi n'ji ina, n'ji ina-ekpebi ga-eme n'ọdịnihu nke ngwaahịa. Na oge nke echiche nke electric itule skuuta, Koowheel electric itule skuuta na "ala carbon gburugburu ebe obibi-echebe, green njem" e ji mara ogide zuru uru nke ngwaahịa, nwere nke na-akparaghị ókè.